tamin'ny admin tamin'ny 2020-12-02
Sophora japonica hanesorana tabilao genistein & coa
Genistein dia fitambarana fitofestrogenika isoflavonoid hita amin'ny soja, paisozy ary legioma hafa. Ny tomban-tsakafo ara-dalàna an'ny olombelona amin'ny genistein, indrindra amin'ny glycosides, dia 0 ka hatramin'ny 0,5 mg / kg. Ny Genistein dia misy amina famenon-tsakafo betsaka kokoa. Genistein dia carcinoge ...
Tatitra fanandramana fanamafisam-peon'ny vy mavesatra an'ny luteolin, Detection Atlas ary Coa
vokatra lehibe an'ny Shaanxi Green Bio-Engineering Co., ltd.
Ny orinasanay dia manana ny rafitra famokarana feno mandroso, hery ara-teknika matanjaka, fampiorenana zavamaniry sahaza, tontolo iainana madio sy milamina. Ny orinasanay dia miaraka amina karazana fitaovana fandinihana mandroso, ary ny fizotry ny famokarana manontolo manomboka amin'ny fanaraha-maso ny akora hatramin'ny farany ...
NMR, tabilao HPLC, tatitra momba ny kaempferol
Sophora japonica nalaina kaempferol 98% Mpanamboatra akora voajanahary voajanahary sy matanjaka any China izahay. Ho an'ny fanomezana vokatra avo lenta, voafetra izahay hifehezana ny fizotran'ny fizotrantsika. Mora ny manome ny vokatra ekstria Sophora japonica amin'ny vidiny mirary satria ...
miakatra ny vidin'ny asidra ferulic
Ho an'ny mpanjifa malala: ny akora asidra Ferulic dia nitombo 20 yuan isan-kilao tato ho ato, ka ny vidin'ny vokatra dia nitombo mihoatra ny 20 yuan, Ho an'ny tombotsoanay iraisana ， Amin'ny alàlan'ny fifampidinihana anatiny ao amin'ny orinasa. Ny vidin'ny asidra ferulika dia nitombo 3 dolara amerikana isaky ny kilao.http: //www.sxg ...
Fanavaozana ara-teknika ny asidra ferulic
Ny asidra ferulika dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny sakafo, fanafody ary kosmetika. Amin'ny fampiharana antsasaky ny asidra ferulika amin'ny indostrian'ny tarehy, ny mpanjifa dia manana fepetra ambony kokoa momba ny loko sy ny solubility. Shaanxi Green Bio-Engineering Co., Ltd. dia nanatsara ny fanandramana hatrany ...
milina bebe kokoa fitaovana
Tamin'ny volana aogositra 2020, niaraka tamin'ny fampitomboana ny baikon'ny mpanjifa, Shaanxi Green Bio-engineering Co., Ltd., miorina amin'ny fitaovana tany am-boalohany, omeo fiara vaovao roa, lafaoro efatra varavarana, foul roa fanehoan-kevitra ary chromatography ranon-javatra avo lenta iray ny mpamokatra. . Ny orinasanay dia ...
Ny ain'ny vokatra dia avy amin'ny fanavaozana mitohy ny teknolojia
Tamin'ny taona 2020, teo ambanin'ny noveloma coronavius ​​pnemonia, indostrialy maro no voa mafy. Teo ambany fitarihan'ity tontolo lehibe ity, dia nitombo ny fivarotana ny Shaanxi green Bio- Engineering Co. Ltd. Tsy tongatonga ho azy izany fa ny valin'ny mpiasa R & D an'ny orinasa sy ny vokatra ...
Glycosides avy amin'ny fitrandrahana zavamaniry
Voaforon'ny siramamy sy akora tsy siramamy. Ny iraisan'ny glycosides dia ao amin'ny ampahany siramamy. Ny karazana aglycones isan-karazany dia samy manana ny asany ara-batana ary manana asa maro. Ohatra, ny ravina digitalis dia misy glycosides fo, ary ny ginseng dia misy ginsenosides ho an'ny qi, shengjin ...
Fampiroboroboana ny vokatra azo avy amin'ny zavamaniry
Mampiseho ny angon-drakitra fa tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2014, nisy 1074 ireo orinasa manondrana entam-barotra hanondrana zava-maniry eto amin'ny fireneko, fiakarana kely raha oharina amin'ny isan'ny orinasa mpanondrana tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona 2013. ho an'ny 50,4%, f ...
Famatsiam-bidy sy fangatahana tsena fitrandrahana zavamaniry
Betsaka ny karazana fakana zavamaniry. Ny famatsiana sy ny fangatahana ireo vokatra ireo dia miova tsy tapaka miaraka amin'ny taona sy ny anton-javatra isan-tsena, ary ny tsy fitoviana eo amin'ny famatsiana sy ny fangatahana dia miseho indraindray. Impact Vokatry ny famatsiana vokatra toy ny akora akora amin'ny fitrandrahana zavamaniry ...